Ngwakọta Semalt na-atụ aro Ngwaọrụ Ntanetị Weebụ maka Ntinye Data
The scraping web ma ọ bụ ihe nchịkọta data ezubere iji wepu ozi bara uru site na Intanet. A makwaara ha dịka mmemme ihe owuwe ihe ubi weebụ ma na-aba uru maka onye ọ bụla na-agbalị ịchọta data sitere na ibe weebụ. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-enyere aka wepu data ma hazie ya n'ụzọ ka mma. Ị nwere ike iji mmemme ndị a iji nakọta ozi gbasara ngwaahịa dị iche iche, ọnụahịa ha, ma nwee ike ịmalite azụmahịa gị n'Intanet - buy links from high pr sites. Ufodu ngwa oru ntanetiti na software di oke ahia, ebe ndi ozo adighi efu gi. Iji ha, ị nwere ike wepu ozi site na weebụsaịtị, rụọ ọrụ na data dị iche iche ma hazie data ozugbo.
Ka anyị nyochaa ndepụta nke 3 ngwa ngwa ntanetị weebụ maka nbudata data.
1. Ndị ọkachamara na-ehichapụ
Ị nwere ike iji ọkachamara nyocha iji wepụ, hazie ma kọwaa ihe ọmụma nke weebụsaịtị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị a ma ama nke nchịkọta data ma dị mma maka ndị ahịa na ndị na-abụghị ndị ahịa. Otutu ụlọ ọrụ na webmasters na-ahọrọ ndị ọkachamara nyocha site na njirimara ya na ọtụtụ nhọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ụfọdụ data-azụmaahịa ndị ọkachamara ma chọọ ịkwalite arụmọrụ nke saịtị gị, ị ga-anwale ọkachamara na Scraping. Enwere ike ịnweta ozi n'ọtụtụ ụdị. Ọ na-efopụ data site na mgbasa ozi mmadụ, ọhụụ akụkọ, ọpụpụ njem na saịtị ntanetị ngwaahịa..
Uipath bụ ebe a ma ama maka igwe na-amụ nkà na ụzụ na ọ bụ nnukwu ntinye data weebụ na ihe nkedo nyocha. Ọ bụ ezigbo maka coders na ndị na-abụghị coders na ga-mgbalị kpam kpam na isi data mmịpụta nsogbu. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dịgasị iche iche na-eji Uipath, wepu weebụsaịtị dị iche iche na PDF, nweta ihe ọmụma sitere na ihe oyiyi ma chekwaa data na draịvụ ike gị. Ị nwekwara ike ịmepụta ihe ntinye ịpị, ntinye ndozi na ọrụ ndị ọzọ yiri ya na Uipath ma ọ dịghị mkpa ka ị nwee mmemme mmemme. Ngwaọrụ a na-achọ ụdị data dị na ihuenyo, a na-enwetakwa rịzọlt dịka JS, Silverlight, na HTML. Uipath na-enyekwa aka ịwasa ebe nrụọrụ weebụ gị na engines ọchụchọ ma dị oke ọnụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu na mmalite. Ị ga-eji usoro a naanị mgbe ị nwere azụmahịa online ma chọọ ịchọta nnukwu ebe nrụọrụ weebụ.
Import.io bụ otu n'ime ihe kachasị mma na nchịkọta data ntanetị na ntanetị. Ị nwere ike iji uru ya dị iche iche mee ihe, ọ bụkwa ihe ọzọ dị iche iche na Kimono na usoro ihe ntanetị ndị ọzọ. Ọ ga egosiputa eserese na-enweghị ike ịkọwapụta nke data dabere na ihe ị chọrọ na atụmanya gị. Naanị ịkwesịrị ịkọwa data ma tinye ụfọdụ okwu ma kwe ka Import.io na-arụ ọrụ. Ị nwere ike idona URL ahụ n'otu n'otu ma nyochaa àgwà nke data scraped. Import.io na-ebupụ data gị bara uru na ederede Google, na-azọpụta oge na ike. Ị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-ehichapu ihe karịrị 10,000 ibe weebụ n'ime nkeji iri abụọ dabere na mgbagwoju anya na ogologo. Ihe kachasị ịtụnanya bụ na import.io na-abịa n'efu na zuru oke maka ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri.